> Resource> iPad> 2 ụzọ nyefee Music si iPad ikuku na kọmputa
Dị a otutu music gị iPad ikuku, ma ugbu a gị iPad ikuku ebe nchekwa na-fọrọ nke nta mee? Ma eleghị anya, ị chọrọ nyefee ha na kọmputa tupu nhichapụ, otú i nwere ike wụnye ngwa, play egwuregwu, na-ekiri vidio na ndị ọzọ were were na gị iPad ikuku, na ịkekọrịta exported music n'etiti gị ezinụlọ na ndị enyi na kọmputa. Ọ bụ effortless nyefee music zụrụ iPad ikuku na kọmputa. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa music jidere site na ndị ọzọ music echekwa ma ọ bụ bibiri si CD, ihe na-aghọ siri ike-edozi. Echegbula. Isiokwu a na-enye gị 3 ụzọ-enyere gị aka nyefee zụrụ na-abụghị zụrụ music na kọmputa.
Method 1. Nyefee zụrụ music si iPad ikuku ka iTunes
Method 2. Copy zụrụ na-abụghị zụrụ music si iPad ikuku na kọmputa
Ọ pụghị ịbụ mfe nyefee zụrụ music on iPad ikuku ka iTunes Library. Ị na-adịghị mkpa ọ bụla 3rd otu ngwá ọrụ. Kama, ị dị nnọọ mkpa ka ikike na kọmputa na-eme nyefe. N'okpuru ebe a bụ zuru nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Open iTunes na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Click Store ma họrọ ikikere nke a Computer ... site na ya adaala menu.
Nzọụkwụ 3. Tinye Apple ID na paswọọdụ ị na-eji ịzụta ihe music.
Nzọụkwụ 4. Jikọọ gị iPad ikuku na kọmputa.
Nzọụkwụ 5. Gaa NGWAỌRỤ na nri pịa gị iPad ikuku. Na ndọpụta menu, pịa Nyefee ịzụrụ.
Nzọụkwụ 6. Chere ruo mgbe nyefe zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị zụrụ music na otutu Apple NJ, i nwere na-ikike kọmputa n'ihi na ha niile. Otú ọ dị, ị na-ekwe ka ikike ruo 5 kọmputa na otu Apple ID. Ọ pụtara na i nwere anya n'ihi na ụzọ ndị ọzọ mgbe ị na-ama ikike 5 kọmputa.
Dị ka ọ bụ ka e kwuru n'elu, music dọwara si CD ma ọ bụ ebudatara site na ndị ọzọ music echekwa (iTunes ekwe)-apụghị depụtaghachiri ka iTunes Library site na ịpị Nyefee ịzụrụ. N'ihi ya, m ukwuu nwere ike ikwu a 3rd otu ngwá ọrụ gị. Ọ bụ Wondershare TunesGo (Win) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-enyere gị nyefee ndị na-abụghị zụrụ music nakwa dị ka zụrụ ndị a Windows na kọmputa na Mac (Mavericks, Mac OS X 10.9) na a ikuku.
Na-esonụ akụkụ nke isiokwu a, m ga-egosi na ị na nkuzi-enyere gị aka nyefee music si iPad ikuku na kọmputa na Windows version - na Wondershare Mobile Go maka IOS. Mac ọrụ nwere ike na-nkuzi dị ka mma. Dị na-agụ na.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPad ikuku na kọmputa na-agba ọsọ ahụ ngwá ọrụ
Jikọọ iPad ikuku na kọmputa na ihe Apple eriri USB. Gbaa ndị ngwá ọrụ na ị ga-ahụ gị iPad Air Ama egosipụta n'ime isi window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iPad ikuku music na kọmputa
Ihe kacha ụzọ nyefee song si iPad ikuku ka PC na-na ịpị Copy iDevice ka iTunes na Export Music ka nchekwa, mkpọchi emi odude ke ala akara.
-Aga n'aka ekpe kọlụm ebe gị iPad ikuku ọdịnaya na-categorized na pịa Media. Na nri panel, pịa Music ịbanye music window. Lelee songs ị na-aga iṅomi.
1.Copy music si iPad ikuku na kọmputa na-ichekwa na a nchekwa: Pịa Export ka na-ahụ a na nchekwa na kọmputa na-azọpụta ya.
2. Nyefee songs si iPad ikuku ka iTunes Library: Pịa triangle n'okpuru Mbupụ na ma họrọ Mbupụ na iTunes Library si ndọpụta ndepụta. Ma ọ bụ pịa Smart Mbupụ na iTunes naanị nyefee songs na-adịghị na iTunes Library, nke na-eme ka i si transfer otu songs ugboro ugboro.
Na Windows version, ị ọbụna nwere ike na-idetuo ndetuta egwu ọkpụkpọ ka a nchekwa ma ọ bụ iTunes Library. Gaa Playlist ịbanye playlist Ohere. Pịa Export ka nyefee ndị a họọrọ listi ọkpụkpọ na kọmputa ma ọ bụ pịa obere triangle n'okpuru Export na họrọ Mbupụ na iTunes Library bugharịa listi ọkpụkpọ.